निलम्बित प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्रको नाम लिएर अदालत परिषरमै खुल्लेआम घुस वार्ता | शुभयुग
निलम्बित प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्रको नाम लिएर अदालत परिषरमै खुल्लेआम घुस वार्ता
काठमाण्डौ – निलम्बित प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेरको नाम लिएर काठमाण्डौ जिल्ला अदालत परिषरमै खुल्लेआम घुस वार्ता भएको पाइएको छ ।
पछिल्लो समय विभिन्न संचारमाध्यमहरुमा काठमाण्डौ जिल्ला अदालत परिषरमै खुल्लेआम घुस वार्ता हुने गरेको समाचारहरु प्रकाशन प्रशारण भैरहँदा उक्त वार्ताको अडियो नै सार्वजनिक भएको छ । प्राप्त अडियोमा जबराको नाम लिँदै नेपाल बार एशोशियशनका निवर्तमान कोषाध्यक्ष रुद्रप्रसाद पोखरेल र जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाबीच टेलिफोन वार्ता भएको छ ।
सर्वसाधरणको ७ अर्बभन्दा बढी रकम ठगी गरेको अभियोगमा प्रहरी अनुसन्धान केन्द्रीय ब्युरो सिआइबीद्वारा पक्राउ परेका सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष ईच्छाराज तामाङ र उनका मामा ससुरा केशवलाल श्रेष्ठलाई मुद्दा चलाएको थियो । तामाङ र श्रेष्ठलाई धरौटीमा छाड्ने विषयमा निलम्बित प्रधान्यायधीश जबरालाई समेत सेटिङ मिलाएको प्राप्त अडियोमा सुन्न सकिन्छ । उक्त अडियो न्युज २४ टेलिभिजनले सार्वजनिक गरेको हो ।
यसअघि वार एशोशिएशनको कोषाध्यक्ष रहेका पोखरेल निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको पक्षमा आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । नेपाल बार एशोशिएशनले जबरालाई महाअभियोग लगाउन माग गर्दै गरेको लामो आन्दोलन विरुद्ध पोखरेल परिचालित भएका थिए । बारको आन्दोलन दबाउन उनले प्रशासन देखि ‘कोट’ वितरण गर्नेसम्मको हर्कत गरेका थिए । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीका अति निकट रहेका पोखरेल एमाले तर्फबाटै बारको कोषाध्यक्ष बन्न सफल भएका थिए ।
यस्तो छ वार्ता :
इच्छाराज तामाङ समेतलाई जेलबाट धरौटीमा छुटाउन वकिल रुद्र प्रसाद पोख्रेल र जिल्ला न्यायाधिस राजकुमार कोइराला बिचको सेटिङ (बोली बुझे अनुसारको ड्राफ्ट)
न्यायाधिस – रुद्रजी !
रुद्र प्रसाद पोख्रेल – प्रधानन्यायाधिशबाट १ नम्बर र तपाईं दुइटैलाई म खबर गर्न लगाइदिन्छु ।
रुद्र प्रसाद पोख्रेल – प्रधानन्यायाधिशबाट १ नम्बरलाई खबर गर्न लगाइदिन्छु । हजुरलाई पनि खबर गर्न लगाइदिन्छु ।
न्यायाधिस – ………..
रुद्र प्रसाद पोख्रेल – हजुरले गर्दै नगर्ने भये त म बेकरमा किन बचन खेर फाल्न किन जाने त, भन्नु न ! गर्दै गर्दिन भन्ने हो भने ……..
रुद्र प्रसाद पोख्रेल – हत्तेरिका तपाईं डराउनु पर्दैन, किन डराएको, यस्तो मौका कहिले आउछ ! अनी किन ? अरु मान्छे कत्रो गरेर बसेका छन ।
न्यायाधिस – त्यो हो कि हुनलाई, तर के भनेदेखी त्यो अब …………(डराएर )
रुद्र प्रसाद पोख्रेल – तपाईंले यो छोड्नु भयो भने तपाईंले तामाङको साम्राज्य पनि सकिन्छ, डिपोजिटकर्ता पनि सकिन्छन । यो मुद्दा अभियोग पत्र लगेर हेर्दा कुनचाही माइकालालले पैसा खाएर यती गर्‍यो भन्ने खालको छ ? अभियोग पत्रनै त्यस्तो बनाएर ल्याएको छ । सहकारी ऐन बमोजिमको कसुर स्थापित गरेर ल्याएको थियो भने हजुरलाई अली अफ्ट्यारो हुन्थ्यो । किनकी त्यहा त ऐनका सबै कुराहरु थिए । के के थे , ठगी त केही गरे ठहरिदैन ! नठहरिने कुरामा मान्छेलाई थुन्न हुन्छ त हजुर ?
न्यायाधिस – (हाँसो, ह ह ह ह) त्यो त हो कि, हुनलाई । त्यो कुरामा म कन्भिन्स छु । तर कुरा के भनेदेखी…….रोएर………!
रुद्र प्रसाद पोख्रेल – त्यस्तो क्या हजुर, त्यो मध्यका केही मान्छे मेरो घरमा आइसके । अफिसमा पनि आइसके । तलाई हामी ठीक गर्छौ भनी सके । बहसनै गर्न सक्नेलाई पनि नभन्ने भन्ने हुन्न । त्यो मध्ये राम प्रसाद श्रेष्ठ भन्ने मेरो क्लाइन्ट रहेछ । रिसाउदै आएका थिए । त्यसको १० करोड कि १२ करोड रहेछ । तपाईं त इमान्दार राम्रो वकिल भनेको त तामाङको पक्षमा त्यस्तो बहस गर्नु भयो तपाईंले भन्दै आएका थिए । अनी मैले …….. !
न्यायाधिस – हिजो डिल्ली प्रसाद भट्टराई भन्ने आठराईको हो ।……… ! वकिललाई त्यसो भन्नु हुन्छ ? वहाँको पेसा हो, धर्म हो भने । हत त्यस्तो भन्नु हुन्न भने । त्यस्तो भन्छन !
रुद्र प्रसाद पोख्रेल – भन्छन के , यस्तो के ! मैले त सुरु देखिनै हजुरलाई भनेको थिए ।
न्यायाधिस – सुन्नु न त , जाहेरवालाको वकिल केशव बराल के रे !
रुद्र प्रसाद पोख्रेल – होइन, रमेश बडाल ।
न्यायाधिस – को रे ! रमेश बडाल बहस गर्न आउने रे ?
रुद्र प्रसाद पोख्रेल – बहस त गर्न पाइयोनि त हजुर !
न्यायाधिस – आज दिनभरी लागि हाल्छ । आज भोली हुन सक्तैन । त्यसले गर्दा फेरी, सुन्नुस न , बर्बाद हुन्छ नि त !
रुद्र प्रसाद पोख्रेल – केही हुँदैन । केही हुन्न !
न्यायाधिस – हँ !
रुद्र प्रसाद पोख्रेल – म माथि गराउछु । माथिबाट संकेत् आएन भने नगरिस्यो हगी । माथिबाट म गराउछु । अनी लिने कुरापनी म लिन्छु । अली राम्रै ढङ्गैले लिउ । यो अबसर सधैं आउँदैन, हेरिस्यो हगी । फेरी ठाउँ भएको ठाउँ छ । ठाउँ नभएको भये हजुर के भन्या तैले भन्नु हुन्थ्यो । मैले चाँही । अब हजुरले त सुरु देखिनै अली अली मानसिकता बनाएको । मैले बरु ।
न्यायाधिस – प्रधानन्यायाधिसले भन्छन त ? प्रधानन्यायाधिसले उनलाई !
रुद्र प्रसाद पोख्रेल – भन्छन, म भनाउछु । लु मैले अब भन्न लगाये । अब बाँकी कुरा गर्नु न तपाईं । आज चिया समयमा तपाईंलाई उसले संकेत गर्छ ।
न्यायाधिस – ल हेर्नु न ! (खितितिती हाँसो) ।
रुद्र प्रसाद पोख्रेल – ल हेरौन होइन ! मैले त्यती गरीसकेपछी हजुरले फेरी नाइ भने ?
न्यायाधिस – आज हुँदैन । भोली हुन्छ भने पछी, आज मुद्दा रोकिने कुरा छैन । हैन …. !
रुद्र प्रसाद पोख्रेल – सामान पनि ल्याओ भन्नु पर्‍यो । उ गर्नु पर्‍यो । त्यत्तिकै फोगटिया त किन गर्ने फेरी । समयनै छैन नि त । हैन किन उ गरिस्या भन्या । सबै कुरा गरिसकेपछी यस्तो बेलामा उ गर्नु हुन्न, सबै कुरा म गरिहाल्छु । बाहिर, माथि पनि म भनाउछु । सामान पनि म लिन्छु । त्यो भन्दा बहिर अन्त कही एस्पोज हुँदैन । केही हुँदैन, डाइरेक्ट डिल गर्छु मैले । यिनिहरुका सबै च्यानल हावा खाए । खासैमा दरो सँग यिनिहरु जान सकेनन ।
न्यायाधिस – धरौटी माग्छन नि, कती माग्ने ? कती भन्नु त !
रुद्र प्रसाद पोख्रेल – एउटा रिजनेबल भन्ने नि ।
रुद्र प्रसाद पोख्रेल – १० करोडको हाराहरिमा माग्नु नि !
न्यायाधिस – कती, १० करोड ! हा हा हा हा । ठीक छ, हुन्छ । अब अफ्ट्यारो पर्‍यो भने हजुर ………!
रुद्र प्रसाद पोख्रेल – पर्दैन, पर्दैन । सधैं यस्तो आउदैन । अरु बेला गर्ने, यस्तो बेलामा एक दुई वटा सिद्धान्त छाट्ने, गर्ने । जाहेरकर्ताको हित भन्ने । पासपोर्ट रोक्ने । कुन्नी के के गर्ने । एक दुई वटा, एक दुइवटा आइडिया निकालौला नि हजुर ।
न्यायाधिस – अँ …….! (हाँसो)
रुद्र प्रसाद पोख्रेल – त्यो गरौ , यता तिर झ्याप्र्याक्कै २ जती लिउ न !
न्यायाधिस – अँ ! ….. (हाँसो)
रुद्र प्रसाद पोख्रेल – माथिबाट हुन्छ । तपाईं, ए राम प्रसाद सर । अहिले गएर मैले गएर नमस्ते गरेर मैले मेरो यती काम तैले गर्नु पर्छ भन्दा गरेन भने त यो जती खुद्रगत को हुन्छ त ? पैसा खाएर चाँही लाल काजीको बारेमा उहिलेदेखी यात्रो गरिरहेको छ, हैन त !
रुद्र प्रसाद पोख्रेल – उनिहरुले त गर्ने नि !
न्यायाधिस – ए अँ !
रुद्र प्रसाद पोख्रेल – केही गर्दैनन । त्यो केही गर्दैनन । नारा जुलुस केही गर्दैनन । माथि जान्छ । माथिबाट उ पनि भएर आउछ । माथिबाट तपाईंको आदेश सदर गर्ने सम्पूर्ण जिम्मा मेरो । तपाईं किन आतिएको ? हो त ?
रुद्र प्रसाद पोख्रेल – पहिला पास हुँदैन होला कि भन्ने थियो । मुद्दा सबै हेरी सकेपछी यो त तपाईंले सक्नु भएन भने माथिकाले सक्छन । बेकारमा अर्काका छोराछोरी उ गरेको किन गर्नुहुन्छ ? तपाईं आफ्नै गरुन ।
रुद्र प्रसाद पोख्रेल – ठीक छ, म भन्न लगाउछु । माथिबाट भन्न लगाउछु । पैसा म बेलुका समाती सक्छु ।
रुद्र प्रसाद पोख्रेल – ५० करोड भन्दा त यसै यसै थुने भइगयोनी त्यसलाई । हा हा हा हा ।
रुद्र प्रसाद पोख्रेल – १० करोड भन्या सानो पैसा होइन ।
रुद्र प्रसाद पोख्रेल – कसरी खान्छ जागिर ? उच्चमा सरकारी वकिल जान्छ । सदर गराएर ल्याउने मेरो काम हो । अनी कसरी जागिर खान्छ ?
रुद्र प्रसाद पोख्रेल – कस्तो कुरा गरिस्या होला ? पत्रीकामा आएकै आधारमा गर्ने हो भने त हजुर जस्तो न्यायाधिस भएको के काम ? यो पत्रीकामा आउने, यो उ गर्ने हो भने त त्यसै तारिखमा छोड्नु पर्ने मान्छे छ । इस्स्युका आधारमा त तारिखमै छोड्नु पर्ने ।
रुद्र प्रसाद पोख्रेल – हैन, हैन । हजुरले साह्रै खुट्टा कमाउने, टेक्तै टेक्तिन भन्ने हो भने त नगरौ कुरा । हैन माथिबाट कुरा आउदा पनि —–
रुद्र प्रसाद पोख्रेल – एउटा त्यसोभये किन बेकारमा गोला तान्ने त ? त्यो अर्काकोमै परेको भये हुन्थ्यो ।
रुद्र प्रसाद पोख्रेल – यत्रो यो एक डेढ महिनाको टेन्सन । बेकारको झर्को किन उ गरीराख्या त ? अब ठाउँ नभएको भये एउटा कुरा हुन्थ्यो क्या ?
रुद्र प्रसाद पोख्रेल – उनिहरुको पक्षमा पनि दुई चार वटा कुरा लेखौलानी हजुर । बिदेश जान नपाउने, पासपोर्ट उ गर्ने, उसमा बस्नु पर्ने भन्ने । के के हुन्छ । मलाई पनि सबै के थाहा हुन्छ र ? हजुरलाई सबै आइडिया छ नि ।
रुद्र प्रसाद पोख्रेल – अब के गरु त ? प्रधानन्यायाधिस कहाँ टाइम लिउँ ?
रुद्र प्रसाद पोख्रेल – सत प्रतिसत भन्छ ।
रुद्र प्रसाद पोख्रेल – १ नम्बरलाई बोलाएर भनिदिन्छ ल ।
रुद्र प्रसाद पोख्रेल – राजुलाई बोलाएर, भन्न लगाएर, राजुले तपाईंलाई भन्छ ।
नेपाल बार एशोशियशन